समाचार - अपरेटिंग लाइटको लागि एक बेल्ट मर्मत अर्डर
जब विदेशी ग्राहकहरू भन्छन् कि मैले तपाईंको अपरेटिंग प्रकाश कहिल्यै खरीद गरेको छैन, के यसको गुणवत्ता विश्वसनीय छ? वा तपाईं मबाट धेरै टाढा हुनुहुन्छ। यदि त्यहाँ एक गुणवत्ता समस्या छ भने मैले के गर्नुपर्छ?
सबै बिक्री, यस समयमा, तपाईंलाई भन्दछ कि हाम्रो उत्पादनहरू सब भन्दा राम्रो हो। तर के तपाईं साँच्चिकै उनीहरूमा विश्वास गर्नुहुन्छ?
अपरेटिंग लाइटको एक पेशेवर निर्माताको रूपमा जुन चिकित्सा उद्योगमा २० वर्षदेखि गहिरो रूपमा संलग्न छ, हामी तपाईंलाई घर र विदेशमा विशाल प्रयोगकर्ता प्रशंसा डाटाका साथ भन्न सक्छौं, कृपया हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्।
केही महिना अघि, हामीले एउटा ग्राहकबाट ईमेल पायौं। २०१ 2013 मा ग्राहकले हाम्रो एलईडी अपरेटिंग प्रकाश किन्नुभयो। त्यसबेलादेखि, कुनै मर्मत अनुरोध गरिएको छैन।
यद्यपि, किनभने पीसीबी बोर्डको सेवा जीवन वास्तवमै यसको सीमामा पुगेको छ, तिनीहरूले हामीलाई नयाँ सामानहरू मर्मत गर्नका लागि लेख्ने निर्णय गर्छन्।
२०१ to देखि २०२० सम्म हामी repair बर्षदेखि यस मर्मत आदेशको लागि पर्खिरहेका छौं।
हामी यो ईमेल प्राप्त गर्न धेरै खुसी छौं। विगतमा, हामी जहिले पनि गुणस्तर रेखालाई पालना गर्दछौं र उच्च-गुणवत्ताका उत्पादनहरू बनाउन प्रयास गरेका छौं। हामी लगातार उत्पाद युद्ध संरचनामा संलग्न नगरी उत्पादन संरचना र डिजाइन अपडेट गर्दछौं। आजकल, हाम्रा उत्पादनहरू धेरै वर्षदेखि ग्राहकहरू द्वारा प्रयोग गरिएको छ। अब ग्राहकहरू अझै सामानहरू खरीद गर्दै छन् र तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न जारी राख्छन्। हाम्रो दृढता अर्थपूर्ण छ भनेर हेर्नको लागि यो पर्याप्त छ।
चीनमा, हामीसँग धेरै ग्राहकहरू छन् जसले हाम्रो गुणवत्तालाई धेरै विश्वास गर्छन्। हाम्रो अपरेटिंग प्रकाश बुढेसकाल पछि, नयाँ अपरेटिंग प्रकाश खरीद गर्दा, तिनीहरूले अझै पनि हाम्रो ब्रान्डलाई प्राथमिकता दिन्छन्। वा, जब पुरानो अस्पताल नयाँ साइटमा सर्छ, तिनीहरूले हामीलाई पुरानो अपरेटिंग प्रकाश हटाउन र नयाँ अस्पतालमा पुन: स्थापना गर्न मद्दत गर्न आग्रह गर्दछन्।
हामी यी प्रयोगकर्ताहरूको बलियो समर्थनका लागि कृतज्ञ छौं, र हामी निश्चित रूपमा नम्रताको भावनालाई समर्थन गर्दछौं, ग्राहकको आवश्यकताहरू ध्यान दिएर सुन्नेछौं, उत्पादनहरू अपग्रेड गर्न जारी राख्नेछौं, र समयसँगै निरन्तरता दिनेछौं।